Faka isihloko se-alamu lapha | Kusuka kuLinux
phumlani | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, I-GNU / Linux, Izaziso
Kulabo abangafuni ukufunda okuningi: Vele ufunde la mazwana kusuka ku- Clem lefebvre kusukela cishe unyaka owedlule ukuthi kungani bekunamathrekhi amabili asemthethweni kuphela enguqulweni 2, uma kuqhathaniswa no-13 enguqulweni 9.
Ngizoxolisa kusengaphambili ngokubhuqa .. Kufanele ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngibhekane nabathuthukisi beGnome. I-GTK3 akuyona i-API ethembekile. Mhlawumbe kufanele kubizwe ngokuthi libgnome. I-GTK3.4 iza ne-Gnome3.4, futhi ibingahambisani nezindikimba zangaphambilini ze-GTK3. Lokhu kusho ukuthi zonke izinhlelo ze-GTK3 zibukeka zimbi kakhulu, hhayi kuphela ngazo zonke izingqikithi ze-GTK2 ezingasekeli i-GTK3 (cishe konke), kodwa futhi nezimbalwa ezikwenzayo. Ngalokhu engqondweni sinezinketho ezintathu:
1) Nikeza ideskithophu enokuhlanganiswa okuncane nezinhlelo zokusebenza ezibukeka zehlukile, ngokususelwa ku-API abayisebenzisayo (engamukeleki nhlobo)
2) Susa zonke izinhlelo zokusebenza ze-GTK3 kusuka ku-Mint bese uzifaka esikhundleni sezinguqulo ezindala kuzinhlelo zokusebenza ze-GTK2 noma ze-GTK2 noma ze-QT (lokhu kufaka phakathi izinhlelo ze-Gnome, kepha ne-Gdebi, Ukusakaza kanye nokunye okunye)
3) Fuck like crazy, susa zonke izingqikithi, futhi uchithe amahora angenakubalwa unikeza iMint-X neMint-Z ukwesekwa okulungile ku-GTK "3.4", yize izophinda iphule futhi ngo-3,6 ...
Siye ngenketho 3 "kulokhu." Ngiyethemba lesi sibonelo esincane sanele ukukholisa onjiniyela benkampani yangaphandle ukuthi bangasebenzisi i-GTK3. Awekho amanothi wokukhishwa noma imibhalo echaza ukubuyela emuva noma ukuthi uxazulula kanjani inkinga etholakele.Ngokweqiniso nginomuzwa wokuthi i-GTK 3.4 yenzelwe i-Gnome 3.4, ukuthi akunandaba ukuthi yephula izinto nokuthi akufanele sizisebenzise ngaphandle kweGnome.
Manje kulabo abafuna ukufunda okuningi:
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, u-IgnorantGuru (umqambi we-SpaceFM, i-PCManFM kuma-steroids) uthumele i-athikili enezingxenye ezimbili ezinhlelweni eziningi ezisemkhondweni ongafanele, eziningi zazo iRed Hat ngemuva. Engxenyeni yokuqala ikhuluma ngezinkinga ze-GTK. Ngokusho kwakhe, zombili izinkinga ezingaphakathi zokuthuthuka kwe-GTK kanye nokuqiniswa kokuqiniswa konjiniyela kuyinselelo kulabo abakha i-software ezinzile ngaphandle kwe-GNOME. Ngokungeziwe kulokho okushiwo nguClem, i-Glade version 3.8 ibe ngeyokugcina ukusekela i-GTK2, nalokho ku-Debian abazihluphi nangokwenza uhlobo lwefa (leyo ezophumela i-Wheezy inguqulo 3.12)
U-IgnorantGuru wabhekana nalezi zinkinga ku-GNOME bugzilla kanye noBenjamin Otte (okuwukuphela konjiniyela we-GTK wesikhathi esigcwele) onezimpendulo zekhwalithi ezithi i-GTK ayibhukudi ngaphakathi konjiniyela abengeziwe, bayakujabulela ukusebenzisa isikhathi sabo ukuqinisekisa ukuhambisana nezindikimba ezingasetshenziswanga kakhulu, nokuthi ababhali bezindikimba ababambe iqhaza entuthukweni beGTK bayavuma ukuthi kungcono ukuvuselela izingqikithi kunokugcina isimo esikhona, nokuthi ngemuva kwalezo zinqumo asikho isikhathi sokuhambisana kwamatimu. U-Emmanuele Bassi ugcwalisa ukuthi u-Adwaita (isihloko esisemthethweni se-GNOME) ushintsha lonke ushintsho ku-GTK, nokuthi i-GTK iyashintsha lapho ababhali bezingqikithi ze-GNOME kanye ne-Windows ne-MacOS becela imfuneko entsha.
Kepha lo mcabango uvela kudala, ngenkathi besacabanga ukuthi i-GNOME 3. izoba njani.Umqondo wazalwa ngokubuyela ku-GNOME uphawu, ngolwazi lomsebenzisi oluhlukile kunele-Windows (ibha yemenyu engezansi) ne-Apple (the ibha yemenyu ngaphezulu), nemibono yama-applet nezandiso basongela lowo mqondo. Uma ingeke ilungiswe, ngeke ilungiswe. Lapho izimbungulu zifika zicela ukubuyisa into enjalo, ziyazivala ngomaki we-WONTFIX. Lokhu kudlulela phambili. Eminyakeni emibili edlule uWilliam Jon McCann ubikile isiphazamisi ku-Transmission ucela ukuthi bangasebenzisi izithonjana endaweni yokwazisa ye-GNOME 3 njengoba bezosusa ukwesekwa. Lapho umlondolozi ekhala ngokuthi lokhu kungalimaza abasebenzisi beXFCE, uMcCann uphendule wathi, “Ngicabanga ukuthi kuzofanele unqume ukuthi ngabe uhlelo lokusebenza lwe-GNOME, Ubuntu, noma i-XFCE, futhi angazi ukuthi luyini noma lwenzani. . »
Ingxenye yesibili I-athikili ikhuluma ngama-udisks, gvfs, udev ne-systemd. Ngokufika kwe-udisks2, ulayini womyalo ushintshiwe, wephula ukuhambisana nesoftware nemibhalo ebincike kuma-udisks. Umbhali wayo uDavid Zeuthen (isisebenzi seRed Hat) ingezwe kumadokhumenti "Lolu hlelo aluhloselwe ukuthi lusetshenziswe ngama-script noma ezinye izinhlelo - izinketho nemiyalo kungenzeka ngezindlela ezingahambelani ngokuzayo nasekukhishweni kwesondlo." Hon Hon Jen Yee, umsunguli we-PCManFM uyazisola ngokungasebenzi kahle kwama-udisks, polkit, consolekit, nokuthi basuka kanjani kufilosofi ye-KISS. Kokubili i-PCManFM neThunar bathembele kwi-gvfs API, okuthi ngokwe-IgnorantGuru ayinakekelwa kahle futhi ayizinzile kakhulu. Ngokuphathelene ne-udev, muva nje onjiniyela abambalwa be-Gentoo benza imfoloko (eudev) ngoba i-udev yayimunceke kakhulu nge-systemd, yephula ukuhambisana nezinhlelo zangaphambilini. I-Linus ibivele i-bugging kubanakekeli ngoba abafuni ukwamukela ama-patches athile athunyelwe ukulungisa ezinye izimbungulu.
Futhi mayelana ne-systemd (ehlongozwe njengokuncika kwe-GNOME), kunencazelo engcono kokuthunyelwe ekushumayeleni ngonya lokho kwenziwa ngawo, okuvunywa ngumdali wawo, uLennard Poettering.
Lokhu okuthunyelwe kuzobizwa ngokuthi "Umbono Wokwakha Uzungu ku-Linux", njengoba i-athikili yokuqala ye-IgnorantGuru yayibizwa kanjalo. Kodwa-ke, uPerseus ungitshele ukuthi lokhu akusilo uzungu kepha kungukucekelwa phansi, futhi i-athikili ingaphezulu kwe-Anti-Red Hat kunalokho engikubhalela kona. Iqiniso ukuthi sizibuze, ngabe iphrojekthi efana nohlelo ihlelwe kanjani? Angisho nje ukuthi ngizimele kuRed Hat, kepha nakuLennart uqobo (sekuvele kuthathwa njengokuphikisana nokuthi angumdali)
Uhlu olukhulu lwemithombo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Faka isihloko se-alamu lapha
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, kumabhulogi amaningi zonke izinqumo ezenziwa yi-ubuntu zihlaselwa futhi zenziwe ubugebengu mahhala, ngaphandle kokugcoba kancane bese ungena ukubuza ufuna eminye imininingwane yokuthi kungani lezi zinqumo zithathwa. Lapho wena njengenkampani ebucayi kufanele uqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo owukhiqizayo, awunakuncika nganoma iyiphi indlela ekuthandweni konjiniyela ongacabangi ngokuthuthuka kwakho noma iminikelo yakho kwiphakeji elishiwoyo, izikhathi nezikhathi zokugcina inkampani enamakhasimende akho, noma okubi kakhulu, kuya ngezinqumo ezenziwa umncintiswano wakho (isigqoko esibomvu). Ngemuva kwakho konke, yonke isoftware eyenziwa yiCanonical inamalayisense ngaphansi kwamalayisensi amahhala, nakumuntu ngamunye ukuthi ngabe unquma ukuyisebenzisa noma cha.
Ngibeka ukuphawula kwami ​​ngaphambi kokufunda okwakho. Futhi yize ngingeyena umlandeli ongumlandeli weCanonical, ngikuqonda kahle ukuthi isisho esithi "imbongolo ibingaqili, izinduku zamenza" induku.
Ngingayibiza ngaphezulu noma ngaphansi:
Ingabe Ubuntu buvaliwe? Thola ukuthi iGnome injani! »
Ufff ... ngiyabonga ukuthi ngishintshele ku-KDE esebenzisa i-QT, ngakho-ke ngihlala kude nabo bonke ububi beGnome / GTK haha
-Lokhu okulandelayo kungumbono wami futhi ngiyaxolisa kusengaphambili uma kukhona okhubekile-
Iqiniso ukuthi iGnome KIMI kubukeka kuyihlazo kumhlaba wonke weLinux, ukufaka kumsebenzisi ovela eGnome 2 ushintsho olungazelelwe nokufundiswa kabusha kwendlela asebenzisana ngayo ne-interface yedeskithophu.
Ngaphandle kokungakwazi ukushintsha ukubukeka ngoba abanumzane beGnome bakholelwa ukuthi yonke ingqikithi yabo eyisicaba nezithonjana zabo eziphelelwe yisikhathi ezivela eGnome 2 zenza inhlanganisela ephelele ...
Ngenhlanhla kunezinye izindlela kuLinux, ngenhlanhla ukuthi kukhona amaphrojekthi afana ne-KDE.
Unenye futhi indlela yobumbano.
Imisebenzi yase-Esteban kusho
Phendula Imisebenzi ye-Esteban
Futhi i-Fluxbox, i-Openbox, i-LXDE, i-XFCE, i-Awesome, i-JMW, njll
Ndoda, uma usebenzisa igobolondo le-gnome, angicabangi ukuthi ibhokisi lokuvula elilula, i-flubxbox njll, kungenye indlela yokuhlangenwe nakho komsebenzisi okudingayo, engicabanga ukuthi sekungokwakho. Futhi kule mpelasonto ngaphoxeka ngabaphathi bamawindi, ngibona ukuthi nge-nvidia yami angikwazanga ukwenza ngokuphelele ukudabuka okuyisiphukuphuku kwalaba bashayeli kunyamalale.
Futhi neCinnamon, MATE, Razor QT ne-E17. Sinenhlanhla yokuthi kunezindawo eziningi kakhulu ongazisebenzisa !!
Iqiniso ukuthi ekuqaleni benginenkinga ethile nge-udisk2 (ikakhulukazi ngeThunar) kepha kancane kancane ibilungiswa futhi nge-systemd okwamanje angibanga nezinkinga.
Nginenguqulo yakamuva ye-GTK3, kepha okwamanje anginankinga ngezinkinga, ikakhulukazi ngoba iningi lisebenzisa i-GTK2 (njengeThunar, LXPanelX, Transmission, njll) kanti ezinye zine-QT4 (futhi enye ine-QT3 okuyiyona Kubukeka kubi, kepha anginandaba)
Cha, uma ekugcineni kuzofanele sivumelane ne-Icaza ...
Mina, njengoba ngishilo iminyaka eminingi kangaka, ngihlala neFluxbox yami futhi ngizolile.
Ngikholelwa ngobuqotho ukuthi uma ubuntu maduze nje, ubunye buzodlulela ku-qt, i-gtk3 izoba nzima kakhulu, izinhlelo zokusebenza ezibaluleke kakhulu zize zafakwa, i-gimp, i-libreoffice, i-chrome, i-firefox, i-blender….
Ngiyavuma; Ngicabanga ukuthi kungani uShuttleworth ehlala ethanda i-Qt ngaphezu kwe-GTK nokuthi kungani Ubuntu ekhethe leyo ndlela namuhla itholakala ku-athikili efanayo. Lapho-ke iCanonical izothatha izinqumo ezingagculisi wonke umuntu; kodwa isiteringi sinesisekelo esicacile.
Yebo yingakho ngaso sonke isikhathi kuhle ukubona izinhlangothi ezi-2 zemali ...
Isikhathi nesikhathi sihamba nesisho. ICanonical ikubonile lokhu kudala ngaphambi kokuba sibe nakho; kodwa-ke, kusukela lapho kuye kwenziwa ubugebengu, kufaka phakathi kusuka kuRed Hat obesekholwe isikhathi eside ukuthi i-GNOME ngeyabo futhi yenza abakuthandayo, ngaphandle kokuholwa.
Uma lokhu kuqhubeka, i-GNOME inokuphela okungenakugwemeka; kuzoba nezimfoloko, kepha hhayi konke ukugcina i-GNOME 2 yakudala, kepha ukusindisa i-GNOME kusuka kubalandeli babathuthukisi bayo.
MMM…. Sengivele ngikufundile lokhu okuthunyelwe ku-esdebian
ILennard ekhuthaza ngoba i-systemd iyisimangaliso esingenaboya, futhi ihlasela noma ngubani oyigxekayo ize ife, ngifunde ingxoxo kuhlu lwamakheli we-debian esikhashaneni esedlule futhi bekukhona ukudubula nokugwazwa.
nakhu onakho. ULennard akabambi iqhaza kodwa wenza uJohn Paul Adrian Glaubitz
Fuck, futhi nomaphi lapho ngithola khona uMatthias Klumpp .. umfana ngemuva kukaTanglu 😛
Mhlawumbe abathuthukisi banesikhathi esibi kakhulu neGnome, kepha-ke, njengomsebenzisi ngizizwa ngigculiseke kakhulu ngayo (hhayi mina kuphela, nobaba uyayisebenzisa futhi uyithola ilungile), ngakho-ke ngingahalalisela bonke abantu abaya ubude obukhulu bokwakha nokugcina le ndawo enhle yedeskithophu.
Ngiyabonga ngezindaba, ngethemba ukuthi izinto zizolungiswa futhi u-2013 ube unyaka omuhle kakhulu we-Linux isiyonke.
U-Abraham Tamayo kusho
I-athikili enhle, into eyinkimbinkimbi kulabo bethu abangajulile kangako olwazini lwentuthuko ye-linux nobuntu bayo. Ngakho-ke bekufanele ngifunde i-athikili kanye nokuphawula kokuqala kabili ukuze ngiqonde ukuthi isihloko siyaphi.
Okuhlangenwe nakho kwami ​​nge-linux kuhluke kakhulu kubantu abaningi.Ngikusebenzela ukuhlela amavidiyo, izithombe, ukuthuthukiswa kwewebhu nokusetshenziswa okujwayelekile kwabo bonke abanye hlola facebook, twitter njll. IComputer yami iyi-laptop eneminyaka engu-7 esebenza ngokulingene, lapho ngiqala ukusebenzisa Ubuntu ikhompyutha isebenze kahle kakhulu baze baphoqa ubumbano. Ngakho-ke Ubuntu bunezinto ezimbili engizidingayo, indawo elula ukuze zonke izinsizakusebenza zenzelwe umsebenzi wami futhi kungafanele ukuthi zifomethwe njalo ezinyangeni eziyisithupha noma minyaka yonke ngoba uhlelo alusebenzi ngendlela obekufanele lusebenze ngayo ngemuva kokuvuselelwa . Ushintsho lwami ku-ArchLinux bekuyindlela yemvelo kepha lapho ngivivinya i-gnome6 negobolondo layo ngingasho futhi ukuthi yize inezinga elithile lokwenza ngokwezifiso ngaphezu kobunye alitholakali kangcono futhi lisebenzisa izinsiza eziningi zohlelo. Iziphetho zami.
Abasebenzisi be-Linux nabo kufanele basolwe ngokufuna nokwenza sengathi amakhompyutha we-PEDORROS "turion, AMD Sempron, ATOM" asebenza kanye ne-MAC noma iWindows 1 ene-Intel i8. iphutha lihlelwe kahle i-compiz ne-interface, hhayi ikhadi lethu levidiyo elihlanganisiwe.
2.- Ungasebenzisi imali ukuxhasa amaphrojekthi nama-distros, kuyiqiniso ukuthi abaningi abakakhokhi amawindi abawasebenzisayo nezinhlelo abazisebenzisayo kumawindi, kepha okufanele sikuqonde ukuthi abantu noma izikhungo ezisekela leyo misebenzi yiwona kuphela amazwi azokuzwakala. Kuyahlekisa ukuthi inkampani ithi izokwethula kanjani iphrojekthi ngokuya nge-linux futhi ngokuzenzakalela amadrayivu asekela i-hardware aphuma.
3. - Izinkampani ezinjengeRed Hat neCanonical aziphikisani ngoba zombili zifuna ukuheha amakhasimende ngoba imakethe yazo incane kakhulu kangangokuthi inzuzo yenye iyalimaza enye. "Imakethe yangempela yi-SERVER", ngakho-ke amalebhu ayo ayideskithophu lapho ngokusho kwalesi sihloko iRedHat no-Ubuntu babhekene ne-gnome-gtk kepha i-openSuse ayinacala kakhulu ekuphatheni kwayo i-KDE kanye nokusetshenziswa okungakhethi kweMono.
4.- Into ebalulekile amafayela «izithombe, umculo, amadokhumenti, amavidiyo». Masiyeke ukukhathazeka ngama-desktops nokuhlanganiswa kwawo nemitapo yolwazi, into ebalulekile ukuthi yini ongayenza ngayo.
Ngingazizwa ngidumazekile uma ngilahlekelwe ideskithophu yami ye-OpenBox engibize kakhulu ukwenza ngezifiso kepha ngiyavuma futhi ukuthi angikwazi ukwenza ngezifiso ngoba ukufakwa kwebhokisi evulekile le-manjaro kwi-laptop yomshana wami kungishiye nganelisekile kakhulu yize u-archbang egxeka i-manjaro ibhokisi lokuvula lemenyu.
Sanibonani futhi ngiyaxolisa ngamazwana.
Phendula u-Abraham Tamayo
isigqoko esibomvu, isigqoko esibomvu ...
Isiqephu 2 esitholakalayo se- "Dead Cyborg"